Baakadaha cad, baakadaha caaga cad, sanduuq caag ah oo nadiif ah, sanduuq caag ah
HLP Klearfold waa soo saare ee dunida ugu weyn ee sanduuqyada caaga ah oo cad , bixiyaha hoggaamineed ee thermoforming caadada iyo tuubooyinka caag ah oo nadiif ah oo wareeg , oo sameeysa ee tabo cusub Baakadaha cad sida Klearfold ® Keeperiyo Aragti ® nidaamka baakadaha, iyo Duofold ® Baakadaha isku dhafan. Noo shaqeeya daabacaadda ugu horumarsan, qurxinta, iyo farsamooyinka diinta. Our lahaansho Jilicsan hooshooda ® dhaliyay technology hubisaa in Klearfold our ® sanduuq caag ah oo nadiif ah si fudud oo dhaqso qotomiyey gacanta iyo mashiinka-buuxiyo codsiyada.
Waxaa naga go'an in bixinta heerka ugu sareeya ee u adeegga macaamiisha, oo u adeegnay baahida sanduuq caag ah oo nadiif ah suuqa North American muddo ka badan 15 sano. Waxaan u dhisay lagu kalsoonaan karo, kaabayaasha aadka wax ku ool ah, iyo khibrad North iibka iyo kooxaha maamulka American. Our shaqaalaha taageerada heegan ah siiyaan 24-ka saac fiiro gaar ah u macaamiisha, iyo in aan ku dadaalnaa in la hirgaliyo: sheegyada sanduuq caag ah gudahood 24 saacadood baarka CAD in saddex ilaa shan maalmood midabka Full Humanitarian sanduuq caag ah hal todobaad ah la helo farshaxanka gudahood la keeno in North America ee lix ilaa sideed isbuuc ah sanduuq caag ansixinta muunad
Waxaan nahay ISO 9001 shahaado iyo Sedex ® xubin. Waxaan ka shaqaynaa adag inay gaadhaan dhammaan heerarka caalamiga ah ee waafaqsan bulshada, iyo waxaan ku dhiirigelinaynaa macaamiisha in ay soo booqdaan oo uu ku sameeyo tayada iyo hantidhawrka waafaqsan bulshada. Waxaan sidoo kale waa xubin ka mid ah Customs-Trade Partnership Against Argagixisada (C-TPAT), barnaamijka ammaanka ikhtiyaar sahaydu hogaaminayo US Customs iyo Border Protection, diiradda lagu saaray horumarinta ammaanka ee silsilado sahayda shirkado gaar ah '.